IATA dia mandefa ny programa fanofanana maharitra amin'ny tontolo iainana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » IATA dia mandefa ny programa fanofanana maharitra amin'ny tontolo iainana
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Na dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny sehatry ny indostrialy aza ny faharetana nandritra ny taona maro, laharam-pahamehana lehibe izy io satria ny sehatra dia miarina amin'ny vokatry ny valanaretina COVID-19.
IATA dia nanolotra fiofanana ho an'ny indostrian'ny fiaramanidina hatramin'ny 1972.
Ny fandaharam-pianarana IATA dia mandrakotra taranja 350 mahery izay nalain'ny mpandray anjara 100,000 XNUMX mahery isan-taona.
Ireo modely isan-karazany dia natao hanehoana ny fomba fiasan'ny hetsika tsirairay sy ny politikan'ny orinasa maharitra amin'ny faharetana.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) dia nandefa programa fanofanana maharitra momba ny tontolo iainana miaraka amin'ny University of Geneva (UNIGE). Na dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny sehatry ny indostrialy aza ny faharetana nandritra ny taona maro, laharam-pahamehana lehibe izy io satria ny sehatra dia miarina amin'ny vokatry ny valanaretina COVID-19. Tamin'ny fanadihadiana vao haingana natao momba ny matihanina amin'ny fanofanana indostrialy mihoatra ny 800, ny faharetana dia nofaritana ho filàna fiofanana ambony, hahazoana antoka fa ny mpiasa dia afaka mahazo ny fahaiza-manao fototra ilaina amin'ny lafiny teknika sy miasa, nefa koa ny fahaiza-manao malemilemy ilaina.
Ny IATA - UNIGE Certificate of Advanced Studies (CAS) amin'ny fitandroana ny tontolo iainana amin'ny fiaramanidina dia misy modely enina mandrakotra ireto lohahevitra manaraka ireto:
Mamolavola paikady maharitra
Rafitra fitantanana tontolo iainana amin'ny fiaramanidina
Solika fiaramanidina maharitra
Andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy sy etika fandaminana
Fivarotana karbonika sy fiaramanidina
Ireo modely isan-karazany dia natao hanehoana ny fomba fiasan'ny hetsika tsirairay sy ny politikan'ny orinasa maharitra amin'ny faharetana. Ny mpandray anjara dia hianatra hamantatra karazana fepetra azo ampiharina hanatsarana ny faharetana amin'ny fotoana fohy, salantsalany ary maharitra. Ny programa dia mampifangaro ireo fampianarana manokana momba ny tontolo iainana miaraka amin'ny andraikitra ara-tsosialy ao amin'ny orinasa, ny etika fandaminana ary ny fitarihana tompon'andraikitra, miaraka amin'ny tanjona ny hamelana ireo mpandray anjara hahita ny valinteniny manokana momba ny dikan'ny hoe "mitarika andraikitra" any amin'ny toeram-piasana misy azy ireo sy ny fomba fandraisana andraikitra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tompon'andraikitra sy ialao ny fahajambana etika.
"Ny mpiasa fiaramanidina dia mahay tokoa satria mila miasa sy manaraka ny fenitra manerantany sy indostrialy. Nandritra ny taona maro dia nampifanaraka ny tolotra fanazaran-tenanay izahay hanomezana fahafaham-po ireo fepetra takiana amin'ny indostria. Noho izany dia tsy tokony hahagaga raha manampy fiofanana maharitra momba ny tontolo iainana amin'ny fandaharam-pianarantsika isika izao. Ny fahazoana antoka fa ireo rehetra miasa amin'ity indostria ity dia omena fotoana ahazoana ireo fahaiza-manao vaovao ireo dia tena ilaina, satria mihamafy hatrany ny fampandehanana maharitra ny asantsika, ary eo am-pananganana ny vokatry ny valanaretina COVID-19, "hoy i Willie Walsh, Tale jeneralin'ny IATA.
IATA dia nifidy ny UNIGE mpiara-miasa efa ela hatrizay hamorona ny fampianarana satria io dia ahafahana mampifangaro manokana ny fahaizana akademika an'ny UNIGE sy ny fahalalan'ny orinasa IATA. Ny singa ara-tsosialin'ny programa dia hampianatra sy hanomana ny mpitondra ho avy amin'ny andraikitra izay handray anjara amin'ny fitambarana indostrian'ny fiaramanidina sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny.
Ny fiofanana dia atolotra ho maodely manokana na fonosana feno ho enina rehetra. Ny fandaharam-pianarana dia alefa amin'ny alàlan'ny efitrano fianarana virtoaly mivantana, manome fampianarana an-tserasera izay ampianarin'ny mpampianatra amin'ny Internet, ahafahan'ny mpandray anjara mifampiresaka, mijery ary mifanakalo hevitra momba ny famelabelarana. Mandritra ireo fotoam-pivoriana, ireo mpandray anjara dia hiara-miasa amin'ny loharanom-pahalalana ihany koa rehefa miasa amina vondrona maromaro, amin'ny sehatra an-tserasera daholo.
IATA dia nanolotra fiofanana ho an'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina nanomboka tamin'ny 1972. Ny fandaharam-pianarany dia mihoatra ny 350 ny taranja izay nalain'ny mpandray anjara 100,000 470 mahery isan-taona. Ireo fampianarana dia atolotra amin'ny endrika isan-karazany toy ny efitrano fianarana (mifanatrika sy virtoaly), an-tserasera, sns. Miaraka amin'ireo mpiara-miofana maherin'ny XNUMX.